Antenimierandoholona : Fanokafana ny fivoriambe ara-potoana voalohany amin'ny taona 2018 | Primature
Antenimierandoholona : Fanokafana ny fivoriambe ara-potoana voalohany amin’ny taona 2018
Anosy, 01 Mey 2018 – Nanome voninahitra ny lanonam-panokafana ny fivoriambe ara-potoana voalohany amin’ity taona 2018 ity teny anivon’ny Antenimierandoholona Anosy ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Manoloana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana dia nitondra fanamarihana ny Praiminisitra : « tsy tokony hisy fiampiantsina intsony izao, nazava ny tenin’ny Filoham-pirenena omaly, ary izaho dia resy lahatra fa ny fifampiresahan’ny samy malagasy ihany no ahafahana mahita izay mety amintsika. Ary mino marimarina aho fa fantatry ny tsirairay ny tokony ataony taorin’ireny hafatry ny Filoham-pirenena omaly ireny, ary atsy ho atsy dia hisy izay fifanatonana izay mba ahitana vahaolana iraisana amahana ny olana misy eto amin’ny firenena, mba hikatsahana ny tombotsoa ambonin’ny firenena ».
Nantitranteriny ny tokony hisian’ny fiverenana an-databatra boribory, ka na ny mpanohitra na ny mpanohana ny fitondrana dia hiverina amin’ny adihevitra indray satria tsy ho zakan’ny firenena intsony raha toa ka misy korontana indray ary niantso ny rehetra ny Lehiben’ny Governemanta mba hahay hijery lavitra amin’ny fampandroasoana ny firenena.
Nasiany teny ihany koa ny mahakasika ny andron’ny 01 mey, ary niderainy manokana ny ezaka nataon’ny Filoham-pirenena sy ny Fitondram-panjakana amin’ny fampakarana 8% ny karaman’ny mpiasam-panjakana, «zava-dehibe ary fahasahiana ara-politika ny fampakarana karama nataon’ny Filoha omaly iny, fa indrindra ny fihainoany ireo mpisam-panjakana rehetra manerana an’i Madagasikara ».
Mahakasika ireo fitakiana sendikaly indray dia nanambara izy fa efa misy ireo voavalin’ny Governemanta saingy misy kosa ireo izay mbola tsy tanteraka satria miankina amin’ny harinkarena no hahafana mamaly izany fangatahana izany. Nitodika manokana tamin’izy ireo ny Praiminisitra ka nilaza fa « tsy natao hitaky ny tombotsoany manokana ihany ireo sendika fa tokony miezaka ihany koa manentana ny mpiasa mba tena hiasa ahazoana vokatra. Betsaka ny milaza fa miahy ny ara-tsosialy fotsiny ihany ny sendika saingy tokony hiahy ny toekarena ihany koa, satria hiankinan’ny fampandrosoana ny asa vita ».
Nanafatrafatra ireo sendika manerana an’i Madagasikara ihany koa ny Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier mba hijery izay tombotsoa ambonin’ny firenena « ilaina ny fitakiana tombotsoa amin’izay sampana misy antsika fa ny zava-dehibe dia ny fijerena ny tombotsoa ambonin’ny firenena ».
← Visite de courtoisie d’une mission d’évaluation humanitaire de l’Union Africaine
JOURNEE DES OFFICIERS